ကျပ် ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း ရောင်းချပေးမည့် ဦးလွင်နိုင်ဦး နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ကျပ် ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း ရောင်းချပေးမည့် ဦးလွင်နိုင်ဦး နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ကျပ် ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း ရောင်းချပေးမည့် ဦးလွင်နိုင်ဦး နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted by Wow on Jan 7, 2012 in Business & Economics | 39 comments
ငွေကျပ် ငါးထောင်ရှိရုံဖြင့် ဂျီအက်စ်အမ်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ပါ့ခ်ရွိုင်ရယ်လ် ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးလွင်နိုင်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ သတင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး The Messenger ဂျာနယ်က ဦးလွင်နိုင်ဦးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
၃-၁-၂၀၁၂ နေ့ ပါ့ခ်ရွိုင်ရယ်လ်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ၅၀၀၀ တန် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းတွေကို ဒီနှစ်ထဲမှာ စတင်ချပေးမယ်လို့ အသိပေးပြောခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ပြည်သူတွေဘက်က မယုံမရဲ ဖြစ်နေကြတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ရွှေပြည်တံခွန်အနေနဲ့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါမလဲ။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကို ပရိုပိုဆယ်လ် တင်ထားပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုတာနဲ့ မတ်ခ်ျလမှာ စတင်မိတ်ဆက်ပြီး ဇွန်လလောက်မှာ ရောင်းချပေးသွားနိုင်မှာပါ။ ဒီပရိုပိုဆယ်ကို တင်ထားကတည်းက ကျွန်တော်တို့မှာ Business Plan ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မလို့ ပြည်သူကို အသိပေးလိုက်တာပါ။
ပရိုပိုဆယ်လ်ကို ဘယ်အချိန်က တင်ခဲ့တာပါလဲ၊ ရွှေပြည်တံခွန်လိုပဲ ဒီဖုန်းကိစ္စကို ပရိုပိုဆယ်လ်တင်ထားတဲ့ တခြား ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်ရော ရှိပါသေးသလား
ပရိုပိုဆယ်လ်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာမှာ စတင်ခဲ့တာပါ၊ တခြား လုပ်ငန်းရှင်တွေ တင်မတင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ငါးထောင်ရောင်းနိုင်ရင် သုံးထောင်၊ နှစ်ထောင်နဲ့ ရောင်းနိုင်မဲ့သူမျိုးရှိရင် ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များ ရှိရင်လည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ လာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းတွေကို မြန်မာငွေ ငါးထောင်လောက်နဲ့ ခြောက်လအတွင်း စရောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ အဆောက်အဦးတွေကိုရော ဘယ်လိုစီစဉ်ထားပါသလဲ။
အခြေခံအဆောက်အဦးတစ်ခု၊ Infrastructure တစ်ခု တည်ဆောက်ရတာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆို လေးငါးနှစ် ဆောက်ရမလား၊ နှစ် ၂၀ စီမံကိန်းနဲ့ သွားရမလားလို့ စဉ်းစားကြမြဲပါ။ တကယ်က အဲလောက် မလိုပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့ တာဝါတွေကို ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ သုံးလနဲ့ ခြောက်လအတွင်းမှာ ပြီးအောင် ဆောက်လို့ရပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။
အခု ငါးသိန်းဖုန်းတွေမှာတောင် လိုင်းကျပ်တဲ့ ပြဿနာတွေရှိနေတော့ တကယ်လို့ ဖုန်းတွေများလာရင် အဲဒီပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
လိုင်းကျပ်တယ်ဆိုတဲ့ ပြဿနာက အင်မတန်သေးငယ်တဲ့ ပြဿနာပါ။ အဲဒါက အသုံးပြုတဲ့ Band Width အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ နည်းပညာပဲလိုအပ်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေ ကျွန်တော်တို့မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဖြေရှင်းနိုင်တဲနည်းပညာတွေထဲက ပညာရပ်အသုံးအနှုန်းနဲ့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ လူအများစုနားလည်နိုင်မဲ့ ဖြေရှင်းနည်း တစ်ခုကို ဥပမာ ပြောပြလို့ရနိုင်မလား။
ဥပမာပြောရရင် ဖုန်းလိုင်း ငါးလိုင်း သုံးခွင့်ပြုထားတယ်။ ကျွန်တော်က လေးလိုင်းပဲ သုံးမယ် တစ်လိုင်းကို emergency အတွက်ထားမယ်ဆိုရင် လိုင်းကျပ်တဲ့ ပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး။ ငါးလိုင်း သုံးရမဲ့နေရာမှာ ခြောက်လိုင်း သုံးရင်၊ ထပ်ပွားရင်တော့ လိုင်းကျပ်တဲ့ ပြဿနာက ရှိနေမှာပါပဲ။ ငါးလိုင်း သုံးရမှာကို ငါးလိုင်းပဲ သုံးမယ်၊ ထပ်မပွားဘူး၊ ကွာလတီကို ထိန်းထားမယ်ဆိုရင် ပြဿနာမရှိပါဘူး။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကလဲ ငါးသိန်းထက်လျှော့တဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း သန်းသုံးဆယ် ငါးနှစ် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်။ ခု ရွှေပြည်တံခွန်က လုပ်တဲ့ ငါးထောင်တန် ဖုန်းကိစ္စကရော မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ လုပ်ဆောင်မှာပါလား။
မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ပုဂ္ဂလိက သတ်သတ် လုပ်မှာပါ။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရဲ့ ပရိုင်းဗိတ်၊ ပတ်ဗလစ်၊ ပါတနာရှစ် ဆိုတဲ့3Ps ကို တဘက်တလမ်းက ပါဝင်တဲ့သဘောပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငါးထောင်တန်ဖုန်းကိစ္စဟာ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့ရင် ဖုန်းအလုံးအရေအတွက် ဘယ်လောက်နဲ့ စတင်ရောင်းချမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားပါသလဲ။ ဘယ်ဒေသတွေမှာ အရင်ရောင်းချမှာပါလဲ။
ကျွန်တော်တို့ Sim Card တစ်သန်း စရောင်းပါ့မယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွေကို ပထမဦးစားပေး အရင်ဆုံးရောင်းချပါ့မယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ စပါးကျီပါ။ အဲဒီဒေသက လူတွေ တိုးတက်ဖို့လိုတယ်။ ခုဆိုရင် အင်ဖော်မေးရှင်း စီးဆင်းမှု နှေးကွေးတဲ့အတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်သူတွေ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေက နစ်နာနေရတယ်။ ဈေးကွက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဈေးအတိုင်း တကယ်ထုတ်လုပ်သူတွေက မရဘူး၊ ပွဲစားကုန်သယ် ကြားခံအဆင့်ဆင့်ကြောင့်မလို့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ သူတို့မှာသာ ဖုန်းရှိရင် ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူသွားမယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စတွေနဲသွားမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စပါးကျီဒေသက လူတွေ တိုးတက်ရင် ကျွန်တော်တို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ထမင်းဝမှာပဲ။
အခု အနည်းဆုံး မြန်မာငွေ ငါးသိန်းပေးမှ ရနိုင်တဲ့ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းတွေကို ငွေ ငါးထောင်ထဲနဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုတော့ ရွှေပြည်တံခွန်အနေနဲ့ စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်မှုရော ရှိပါရဲ့လား။
ဒီဖုန်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးက ဒီလောက်နဲ့ရောင်းလို့ရလို့ ရောင်းတာပါ။ တကယ်ရောင်းနိုင်လို့ ရောင်းတာပါ။ ကျွန်တော်တို့က ထူးပြီး လုပ်ပေးရတာမရှိပါဘူး။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့တယ်ဆိုတာ လူတွေကို ပိုက်ဆံပေးလို့ ကောင်းသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေမှာ ဒီဆက်သွယ်ရေးလေး တစ်ခုလွယ်ကူအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုရင် သူ့အပေါ်က ရလာမဲ့အကျိုးကျေးဇူးက အများကြီးပဲ။ အဲဒါကိုလဲ နိုင်ငံတော် သမ္မတနဲ့ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲတွေက သိတယ်။ အဲဒါကြောင့် လမ်းဖောက်ပေးတယ်။ ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ရဲရဲမလျှောက်ရမှာလဲ။ အမှန်တကယ်က ငါးထောင်ဆိုတာတောင် များတယ်။ အလကားပေးသင့်တာ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ တစ်မိနစ်ကို အစိတ်ဆိုတာကလဲ များတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ လေးကျပ်ခွဲ ငါးကျပ်လောက်ပဲ ရှိတာ။ ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အားလုံးခံစားရမဲ့ အခွင့်အရေးတွေပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ထူးပြီး လုပ်ပေးရတာမရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပြောချင်တာက ဖုန်းဆိုတာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းမဟုတ်ဖူး၊ စားစရာလည်း မဟုတ်ဖူး၊ လူတိုင်းလူတိုင်း ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာ၊ ကြားခံပစ္စည်းတစ်ခုပဲ။
အခု ရွှေပြည်တံခွန်က နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကို ပရိုပိုဆယ်လ်တင်ထားတုန်း အဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ခွင့်ပြုမယ် မပြုဘူး မသိရသေးဘဲနဲ့ လူထုကို အသိပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုသဘောထားနဲ့ အသိပေးလိုက်တာပါလဲ။ လိုအပ်တဲ့ Infrastructure တွေက အသင့်ဖြစ်ပါပြီလား။
အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ပြည်သူကို အသိပေးတာပ။ ကျွန်တော်တို့မှာ Business Plan ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ ခွင့်ပြုရင် မနက်ဖြန်စလုပ်မယ်။ စမယ်ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို စလုပ်မယ်ဆိုတာ Master Plan ရှိပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ပြောဖို့ စောနေပါတယ်။ တခုခု ထူးခြားတာနဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ထပ်လုပ်ပြီးတော့ အခုလိုပဲ အသိပေးပါမယ်။
ကနဦးပေးသွင်းရမှာက မြန်မာငွေကျပ် ငါးထောင်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုခက ၂၅-၃၀ ဆိုတော့ အင်တာနက် အသုံးပြုခကရော ဘယ်လို ပေးဆောင်ရမှာပါလဲ။ အင်တာနက် အသုံးပြုဖို့ကိုသီးသန့် ထပ်ပေးဖို့ လိုပါသလား။
အင်တာနက် အသုံးပြုခက လုပ်ခွင့်ရတာနဲ့ ထပ်ထုတ်ပြန်ပါ့မယ်။ အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ပါ့မယ်။ အင်တာနက် ဆားဗစ်အတွက် ထပ်ပြီး ထည့်ဖို့မလိုပါဘူး။ အဲဒါကျတော့ လူလည်ကျလွန်းရာ ကျနေပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ကားဝယ်တာ ဘီးပါလား၊ စီယာတိုင်ပါလားလို့ မေးနေတာနဲ့ တူနေတယ်။ ဖုန်းဝယ်ပါပြီဆိုမှ အင်တာနက်ဆားဗစ်လည်း တစ်ပြိုင်တည်းပါပါတယ်။ 3G ဆိုပြီးတော့ အင်တာနက်ထပ်သုံးရင် ဘယ်လောက် ထပ်ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာကျတော့ ကျွန်တ်ာတို့ မလုပ် ပါဘူး။
မြန်မာငွေကျပ် ငါးထောင်နဲ့ ဂျီအက်စ်အမ် ဆင်းကဒ်ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအပေါ် မယုံမရဲဖြစ်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို ရွှေပြည်တံခွန်အနေနဲ့ ဘာများ ထပ်ဖြည့် ပြောချင်ပါသလဲ။
ဒီအခွင့်အရေးဟာ ပြည်သူတိုင်းရရမဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က Magician တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေမှာ ဖုန်းတစ်လုံးကို ငွေအနည်းငယ်နဲ့ အလွယ်တကူပိုင်ဆိုင်နေရတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဖုန်းတလုံးရဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားနေရတယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက ထူးပြီးလုပ်ပေးရတာလဲ မရှိပါဘူး။ ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်ခွင့်ရရင် လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ယူမှာပါ။ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ဆိုရင် လူတွေက တစ်ဘက်နိုင်ငံက ဖုန်းတွေကို သုံးကြပါတယ်။ အဲဒါ ဘာဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ခံစားရလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နယ်ချဲ့ခံနေရတယ်လို့ ခံစားရတာ။ ကျွန်နော်တို့ ပိုင်နက်ထဲမှာ၊ ကျွန်တော်တို့ သွေးချင်းတွေက သူများနိုင်ငံက ဖုန်းကို သုံးပြီးတော့ သူများနိုင်ငံကို ဖုန်းဖိုးပေးနေရတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော် မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံထဲမှာ ကျွန်တော်တို့က ထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေပဲ သုံးနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရပါမယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးကလဲ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ဖို့လိုတယ်။ လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်ရမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီစကားကို ကျွန်တော်တို့ ဦးထိပ်ထားပါတယ်။ သမ္မတကြီးရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပါဝင်ချင်တယ်။ ၀င်ငွေနဲပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အတွက် ဆက်သွယ်ရေးမြန်ဆန်လွယ်ကူဖို့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပေးချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပါ့မယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ ခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သစ်ထူးလွင် at 1/06/2012 07:30:00 PM
ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွေကို ပထမဦးစားပေး အရင်ဆုံးရောင်းချပါ့မယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ စပါးကျီပါ။ အဲဒီဒေသက လူတွေ တိုးတက်ဖို့လိုတယ်။ ခုဆိုရင် အင်ဖော်မေးရှင်း စီးဆင်းမှု နှေးကွေးတဲ့အတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်သူတွေ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေက နစ်နာနေရတယ်။ ဈေးကွက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဈေးအတိုင်း တကယ်ထုတ်လုပ်သူတွေက မရဘူး၊ ပွဲစားကုန်သယ် ကြားခံအဆင့်ဆင့်ကြောင့်မလို့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ သူတို့မှာသာ ဖုန်းရှိရင် ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူသွားမယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စတွေနဲသွားမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စပါးကျီဒေသက လူတွေ တိုးတက်ရင် ကျွန်တော်တို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ထမင်းဝမှာပဲ။
လူကတော့ လူမှန်နဲ့တော့ တူတယ်ဗျ ….
တောင်တန်းကမောင်ဆန်းရေ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အိမ်အကူတွေက အစ ဖုန်းကိုင်နေနိုင်တာ… ဒီမှာ ဖုန်းက ဦးလွင်နိုင်ဦးပြောသလို ဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်နေတာမြင်တိုင်း ရင်ထဲ ကလိကလိပါ…
aww zu69 says:
လေပြည်တံခွန် company နဲ့ ဥက္ကဌ လေနိုင်ဦးနဲ့တော့ ကျုပ်တို့ဒီတသက် ၅၀၀၀ထောင်တန်
ခုတော့ MP4 သီချင်းထဲ့ပြီးနားထောင်နေရသဗျာ..
ခွင့်ပြုချက်ရမရကို လောင်းချင်သူရှိရင် လောင်းလိုက်ချင်သေးတော့ ….။
အလောင်းစားတော့ဝါသနာမပါလို့ မလောင်းတော့ဘူး.ဒါပေမဲ့ ‘လွန်ဆွဲပွဲ’ လိုဘယ်ဘက်ကနိုင်မလဲ လို့တော့ စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
ဘယ်ဘက် ကနိုင်မယ်ထင်လဲ…လောလောဆယ်တော့ ပြည်သူတွေ အရေး သမ္မ တကြီး အားပေးနေတယ်နော….။
ဘယ်သူမပြုမိမိမှုပါ ဘာသာတရားဆိုတာ ကိုးကွယ်မှုပါ ကြိုက်ရာကို ကိုးကွယ်လို့ရတယ် မှန်ကန်မှုဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆတစ်ခုပါ ကြိုက်ရာကို မှန်ကန်လို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ အချိန်အခါပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်တာလဲ သဘောသဘာဝတစ်ခုပါ မိမိကြောင့် သူတစ်ပါးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်ပါစေနဲ့ ကောင်းသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ စည်းရုံးနိုင်ပါစေ
တကယ်ချပေးရင် ငါးသိန်းတန် ဖုန်းတွေရော ရောင်းအားကျနိုင်လား
ချပေးလို့ကတော့ ဒို့ရွာထဲက ကွမ်းတောင်ကိုင်အပျိုချောလေးကို ၀ယ်ပေးမယ်
သူလေးနဲ့ညတိုင်း လေပွားမယ် ချစ်စကားလေးတွေပြောမယ်
ဟိတ် ရွာထဲကလူတွေ ရေဒီယိုနဲ့တော့ ခိုးနားထောင်နဲ့နော် ဖရဲရှက်တယ်
ဘာ ရွာထဲမှာ ကွမ်းယာရောင်းတဲ့သူကို ၀ယ်ပေးမယ်၊ ဟီး ကွမ်းယာပြေးရောင်းဦးမှ…
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် “ရွှေပြည်တံခွန်ကုမ္ပဏီ” ပါ ဘဲ ။
အင်း အဲဂလိုဆိုရင်တော့ ဖုန်းပြောစရာ လူရှာဦးမှပါ…။ ဟိဟိ မောင်ပေရေ မင်းပြောတဲ့ အပျိုကြီးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတော့….။
အစ်ဖ် ယူအာ လယ်ဒီ
အပျိုဂျီး အစ်စ် ဝိတ်တင်းဖော်ယူ
ဆက်သွယ်မှုပြင်ပတွေ ရောက်ရှိနေသရွေ့ ခေါ်ဆို၍ မရနိုင်ပါရှင်တဲ့ (အဲအပျိုကြီးဖုန်းက အဲလိုဖြစ်နေဦးမယ်နော် လေးနီ)
ပြောထားတာတော့အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားတွေပါ။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တင်ပြထားတာလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုအမှောင့်ပရောဂမျိုးပဲကြုံကြုံ မယိမ်းမယိုင်ကြံကြံခိုင်ရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့အမှောင့်ပရောဂ တွေကြောင့်လမ်းမပျောက်သွားပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေပါတယ်။
ထေရဝါရ ထွက်တဲ့လူနဲ့မှားပြီးမန့်မိလို့ ဆောရီး
၅၀၀၀ိ/ ဖုန်းအမှန်တကယ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဝမ်းသာစရာပါဗျာ ဒါပေမယ့် မူဝါဒတွေ ဘာတွေကျ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပေါင်းလုပ်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်တာဘဲ
လာမနောက်နဲ့နော် ကိုပေစိ…. ပြူးတောင်သွားတယ်… မျက်လုံး
မူဝါဒတွေကို ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပေါင်းလို့ကတော့ ဒုံရင်းပဲသွားမှာပေါ့
“အင်တာနက် အသုံးပြုခက လုပ်ခွင့်ရတာနဲ့ ထပ်ထုတ်ပြန်ပါ့မယ်။ အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ပါ့မယ်။ အင်တာနက် ဆားဗစ်အတွက် ထပ်ပြီး ထည့်ဖို့မလိုပါဘူး။ အဲဒါကျတော့ လူလည်ကျလွန်းရာ ကျနေပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ကားဝယ်တာ ဘီးပါလား၊ စီယာတိုင်ပါလားလို့ မေးနေတာနဲ့ တူနေတယ်။ ဖုန်းဝယ်ပါပြီဆိုမှ အင်တာနက်ဆားဗစ်လည်း တစ်ပြိုင်တည်းပါပါတယ်။ 3G ဆိုပြီးတော့ အင်တာနက်ထပ်သုံးရင် ဘယ်လောက် ထပ်ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာကျတော့ ကျွန်တ်ာတို့ မလုပ် ပါဘူး။”
ဆက်သွယ်ရေးက လူပါးဝထားတာတွေ အကုန်ပေါ်ကုန်ပြီ။
ဟိုတုန်းက ၁၅ သိန်းတန်ဖုန်းစာချုပ်တွေမှာဆိုရင်လည်း သုံးစွဲသူအခွင့်အရေးဘာမှ မရှိဘူး၊ ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
“အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ပြည်သူကို အသိပေးတာပ။ ကျွန်တော်တို့မှာ Business Plan ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ ခွင့်ပြုရင် မနက်ဖြန်စလုပ်မယ်။ စမယ်ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို စလုပ်မယ်ဆိုတာ Master Plan ရှိပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ ပြောဖို့ စောနေပါတယ်။ တခုခု ထူးခြားတာနဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ထပ်လုပ်ပြီးတော့ အခုလိုပဲ အသိပေးပါမယ်။”
ပြည်သူကိုအရင်အသိပေးထားတော့ ခွင့်မပြုရင် မပြုတဲ့လူရဲ့အပစ်ပေါ့၊ခွင့်ပြုရင်
ပြောထားတဲ့ ကုမ္ပဏီကလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြရတော့မယ်။ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ထရန်စမစ်ရှင်းပိုင်းကို ကိုယ်ပိုင် ဆက်ကြောင်းတည်ဆောက်မှာလား၊ လက်ရှိဆက်သွယ်ရေးရဲ့ ဆက်ကြောင်းတွေ ပေါ်က ငှားသုံးမှာလား၊သိချင်မိပါတယ်။
ကြောင်လေးရေ ဟိုစီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ လူညစ်ကြီးတွေ ဒီလောက် ဆွေ၇ဆက် မျိုး ၇ဆက် စားသောက်မကုန်ရပြီးတော့ ကျေနပ်သင့်နေပါပြီ…
အခုကုမ္မဏီကတော့ စိန်ခေါ်လိုက်ပီ… သူတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲ…
အဲဒီ့လူ လူပါးဗျ ….
အခက်အခဲတွေ အများကြီး ဖြစ်လာနှိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးမိလို့ မီဒီယာနဲ့ အရင်ကိုင်ထားတယ် ….
ပြည်သူ့အားကို အ၇င် ယူထားတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ ..
ဖြစ်လာရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ windtalker ရယ်…
ဟီ…ဟီ့ ပူနဲ့ မီးမှာ အဒေါ်အပျိုဂျီးဒွေရှိဒယ်…
ဟိုလူဂျီးတွေ သူရို့စားပေါက်ပိတ်တယ်ဆိုပြီး မညစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်….
အမတ်ဝင် အရွေးခံရင် ဒီလို လူမျိုးကို မဲ ပေးဘို့ အသင့်ဘဲ။
ရဲရဲဝန့်ဝန့် နဲ့ အစိုးရ တဖွဲ့လုံးကို စိန်ခေါ်လိုက်တာဘဲ။
ဒါမှ ငါးထောင်တန်းတရွက်ပေးရုံနဲ့ ဖုန်းလိုင်းတစ်ခု့ရတယ်လို့
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်နေတဲ့ ဘီဇနက်မန်းကြီးများ
ဆင်းကတ်နဲ့ဖုန်းပြောခ အပေါ်၂သီးစားဖို့ကြံနေတဲ့ လက်ရှိဘိဇနက်မန်းကြီးတွေ ကိုလုပ်ချင်ရာလုပ်လို့မရအောင်နှောင့်ပေးနိုင်ရင်ပဲ ၅၀၀၀နဲ့ မရခဲ့ရင်တောင်ကျေနပ်ရမှာပဲ..
သူပရောဂျက်ရမရ မသေချာပေမဲ့ အနိမ့်ဆုံးတော့ တဖက်လုပ်ငန်းကြီးတွေ ဖုန်းဈေးကိုစွတ်မတင်နိုင်အောင်.၀င်ထောက်ပေးတာနဲ့တင်လေးစားပေးထားတယ်ဗျာ..
ဟားဟား ကြိုက်တယ်….ပဲသီးထိုးတဲ့ပိုးက ပဲသီးထဲကဘဲ ထွက်တာ….
ဒီလို အတွင်းက ပိုးထိုးမှ ပဲသီးက စားမရဘဲ ပစ်လိုက်ရတာ…
အပြင်က တဖဲ့ဖဲ့ နဲ့ ဖဲ့ထုတ်နေလို့ ဒီကောင်တွေ….အဲ..ဒီပဲသီး ဘယ်တော့မှ……….?
အင်း ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ဒါပေမယ့်ဗျာ political trick ဆိုရင်တော့. စဉ်းစား
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီစကား(ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့တယ်ဆိုတာ လူတွေကို ပိုက်ဆံပေးလို့ ကောင်းသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး)အကြိုက်ဆုံး
ဒီပုဂ္ဂိုလ် တကယ်လုပ်မဲ့လူစားမျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားရင်တော့ လက်ဝါးကြီးအုပ်တွေကို နရင်းအုပ်လို့ရပြီဗျ။
ရည်ရွယ်ချက်နဲ. စေတနာအရမ်းကောင်းပါတယ်.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို စေတနာထားပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည့်အတွက် ကြည့်ပေးမယ့် ကုမ္ပဏီတွေများလာရင် ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံကြီး အဆင့်အတန်းရှိပြီ ပေါ့.. စောင့်မျှော်နေပါမယ်.. အရင်ကလဲစောင့်တယ်.. အခုလဲစောင့်နေမယ်.. နောက်လဲ….. ???????????
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အကျင့်ပျက်အရာရှိတွေ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ကုမ္မဏီတွေက ပြည်သူ့ တွေ ကို လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ ပြီး ဆင်းရဲမွဲတေအောင် ကြံနေတဲ့ အကျင့်ပျက် အဂတိလိုက်စားမှု ကို အသိပေးလိုက်တာပါ ပဲ။
ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရဲရဲဝန့်ဝန့် နဲ့ ပြည်သူတွေ အရေး လုပ်ပြ တာ ကို ထောက်ခံပါတယ်။ တိုင်း ပြည် အတွက် ရည်ရွယ်ချက်နဲ. စေတနာအရမ်းကောင်းပါတယ်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့တယ်ဆိုတာ လက်ဝါးကြီးအုပ်တွေရဲ့ စီးပွားရေး စားပေါက်ပိတ် ပြီး ဆင်းရဲမွဲတေမှု မဖြစ်နိုင်အောင်လျှော့တာ ပါ။ ပြည်သူတွေ အတွက် မဟုတ် ပါ။ စီးပွားရေးသမားတွေက ဘယ်သူ့ ဘယ်လောက်ပေးရင် ဘာပြန်ရမယ်ဆိုတာ သိသလို အကျင့်ပျက် အစိုးရအရာရှိတွေဘက်ကလည်း ရေရှည် စားရအောင် လုပ်တယ်။
ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်း မြှင့်ထားတာ ဟာ ငွေဖောင်းပွမှု မြှင့်ဖို့ပါ။ ကုန်ဈေးနှုန်း လည်း မြှင့်ဖို့ပါ။ စီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ ကုမ္မဏီတွေ ကို ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ တာပါ ။ ပြည်သူတွေဆင်းရဲမွဲတေဖို့ပါ။ လူနေမှုစရိတ် မကာမိပါ။
အစိုးရ တဖွဲ့လုံး ပြည်သူတွေအတွက်ရပ်တည်ပေးသင့်တယ်။ စေတနာထားပြီး ကိုယ့်တိုင်း ပြည် အတွက် ကြည့်ပေးပါ။
ရွှေပြည်တံခွန်ကလည်း ပြည်သူတွေအတွက်ရပ်တည်ပေးသင့်တယ်။ စေတနာထားပြီး ကိုယ့်တိုင်း ပြည် အတွက် ကြည့်ပေးပါ။ လမ်းမပျောက်သွားပါစေနဲ့လို့ထပ်ပြီး ဆုတောင်းနေပါတယ်။
မိမိကြောင့် သူတစ်ပါးရဲ့စီးပွားရေး မထိခိုက်ပါစေနဲ့။
မလေးရှားမှာ Sim Card တစ်ခုကို Rm.10 ပဲရှိတယ်…ယနေ့ ပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင် မြန်မာငွေနဲ့ ၂၅၀၀တောင်မရှိပါဘူး…တကယ်လုပ်မယ် ဆိုရင် လုပ်လို့ရပါတယ်…တကယ်လုပ်ဖို့ဘဲလိုပါတယ်…အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်..
Technically အရပြောရရင် အရင်ဆုံး တိုင်တွေထောင်ဖို့နေရာတွေလိုပါမယ်…
MPT ရဲ့ရှိပြီးသာ Infrastructure အပေါ်မှာ မမှီခိုရင်ပေါ့…
နောက်တစ်ခုက Telecom အပိုင်းအတွက် ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှနည်းပညာရှင်တွေလိုပါမယ်…
(Telecom Diploma ကိုင်ထားတဲ့လူများဝမ်းမြောက်ဖွယ်)
နောက်တစ်ခုက သူ့ GSM ကနေပြီးတော့ MPT လိုင်းတွေကို ခေါ်ဆိုဖို့ Routing လိုပါမယ်…
အဲဒါကို MPT က ခွင့်ပြုပေးဖို့လိုပါတယ်….(သတ်ချင်လို့ခွင့်မပြုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ)
၅၀၀၀ ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံက လူတိုင်းနီးပါးသုံးနိုင်လို့ ကိုယ်ပိုင် Network နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ MPT လိုင်းဖုန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလား။
၅၀၀၀ ဆိုတဲ့ ငွေနဲ့ Bill ပေါ်မှာပဲ အမြတ်ယူရင်တောင်…(၃)နှစ်အတွင်း အရင်းကျေနိုင်ပါတယ်…
Telecom အလုပ်တွေ မြန်မာပြည်မှာရှိလာတော့မယ်ဟေး……စောင့်ခဲ့တာ (၁၀)နှစ်ကျော်ပေါ့…
ဟုတ်တယ်… သူပြောသလို အမှန်ဆို အလကားတောင်ပေးသင့်တာ.. ဖုန်း Bill ပေါ်မှာပဲ ယူသွားရင်ကို အရင်းကျေနိုင်ပါတယ်.. အခု သုံးသိန်း တန်ဖုန်းတွေထွက်လာမယ်.. ဖုန်းတစ်လုံးကို သုံးသိန်း လိုင်း လေးသန်းလုပ်ဖို့ လျာထားတယ်… လိုင်းငါးသိန်း ပဲအရင် ရောင်းရဦး Infrastructure ဖိုးတော့ကျေနေလောက်ပါပြီ…
အခုအင်တာဗျူးကိုဖတ်ရသလောက်တော့ တော်တော်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲပဲ… E-lite နဲ့ ဆက်သွယ်ေ၇းဝန်ကြီးဌာန နဲ့ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ကြမလဲ… ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကတော့ သူတို့ကိုကျော်လို့မရပါဘူး လို့တော့ပြောသွားတယ်…
အခုချိန်မှာ Sanction ပွင့်သွားရင် အရမ်းကောင်းမယ်… ပြိုင်ဘက်များလာမယ်…. တရုတ်၊ ကုလား၊ ထိုင်း ကုမ္ပဏီတွေပဲ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားလို့မရတော့ဘူး… နည်းပညာတွေလဲမြင့်လာမယ်.. အနောက်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတွေလဲ ဆက်သွယ်ရေးအပိုင်းကို အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေချင်တယ်… သူတို့တွေ ပြိုင်ဘက်များလေ… စားသုံးသူတွေ ဈေးကျလေ.. ကွာလတီကောင်းကောင်းသုံးရလေပဲ… ခုတောင် E-Lite နဲ့ ရွှေပြည်တံခွန်နဲ့တွေ့ကြပြီ…
ကြိုဆိုပါတယ် ရွှေပြည်တံခွန်…. ရွှေမြန်မာပြည်ကြီးအပေါ် တံခွန်လွှ့င့်နိုင်ပါစေဗျာ…
“သူ့ GSM ကနေပြီးတော့ MPT လိုင်းတွေကို ခေါ်ဆိုဖို့ Routing လိုပါမယ်…
၅၀၀၀ ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံက လူတိုင်းနီးပါးသုံးနိုင်လို့ ကိုယ်ပိုင် Network နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ MPT လိုင်းဖုန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလား။”
MPT ဖုန်းတွေ အကုန်လွှင့်ပြစ်ပြီး သူ့ ဖုန်းဘဲ ကိုင်ကြစို့ပေါ့ဗျာ။ အပြော နဲ့ အလုပ်နဲ့ ညီအောင် လုပ်ပြနိုင်ရင်ပေါ့။
လူတန်းစားမရွေး အသုံးပြုနိုင်တဲ့၊ ဆက်သွယ်ရေးအရင်ကထက် အများကြီး အဆင်ပြေသွားတဲ့ အတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။ ရွာသူားတို့ရေ….ဇွန်လမှာ လူတိုးဖို့ အားမွေးထားတော့….။
ငါးထောင်တန် ဖုန်းတွေကိုတော့ အငမ်းမရကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ငါးသိန်းတန်နဲ့ နှစ်သိန်းခွဲတန်ကောင်
တွေက ညစ်ကြမှာကိုတော့ စိုးရိမ်ပါရဲ့။
နိုင်ငံတော်အစိုးရကခွင့်ပြုဘို့ သာအဓိကပါ။
ထုတ်အုံး၊တနေ့ ကိုပျမ်းမျှ4မိနစ်ဘဲသုံး၊တနေ့ ဝင်ငွေသန်းတစ်ရာဘဲ။
တစ်နှစ် 365 ရက်x100သန်း=36500သန်းဘဲ။ဒါ4မိနစ်နဲ့ တွက်ထားတာ။ပိုဘို့ ဘဲရှိတယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရကခွင့်ပြုလိုက်လို့ ကတော့ဖုံးကဒ်အခမဲ့ပေးမဲ့သူတွေဝင်လာမှာမြင်ယောင်မိသေး။
အစိုးရဘက်က ခွင့်ပြုရင်တော့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
MPT နဲ့ routing မဖြစ်မှာလည်း မပူပါနဲ့ ၊၊
အသုံးပြုတဲ့သူများမှာဖြစ်တဲ့အတွက် MPT ကွန်ယက်ကြီး ရပ်တန့်မသွားစေချင်ရင် MPT ကိုယ်တိုင် routing လုပ်ခွင့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလာရမှာပါ။
နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူလူထုပေါ်မှာ တကယ်ဘဲ စေတနာရှိတယ်ဆိုရင် လုပ်ပေးကြဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီ
MPT က ကောင်ကြီးတွေ က စားခွက်လာလုနေတော့ အကြံရခက် ခံရခက်ဖြစ်နေပုံပဲ ၊
လုပ်နိုင်သူတွေက လုပ်မယ်ဆိုတော့လဲ မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း အရှက်မရှိ ပြန်ချေပ နေ
သေးတယ် ။ ပြည်သူတွေ အဆင်ပြေဖို့ ကြောက်နေပုံပါ ။